चर्चित कोरोना विज्ञ भन्छन् : दोस्रो लहर अहिलेको भन्दा धेरै डरलाग्दो हुन्छ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/चर्चित कोरोना विज्ञ भन्छन् : दोस्रो लहर अहिलेको भन्दा धेरै डरलाग्दो हुन्छ
चर्चित कोरोना विज्ञ भन्छन् : दोस्रो लहर अहिलेको भन्दा धेरै डरलाग्दो हुन्छ
डा.शेखर मन्डे । धेरै व्यक्तिहरू महसुस गर्न थालेका छन् कि कोरोना संक्रमण ठूलो हदसम्म नियन्त्रण गरिएको छ । यसको कारण यो हो कि हाल भारतमा नयाँ संक्रमितको संख्यामा क्रमिक रुपमा कमी आएको छ ।
अझ यसरी भनौँ कहि अहिले दैनिक फेला पर्ने संक्रमितहरुको संख्यामा स्थिरता देखिएको छ । निको हुने दर ८६ प्रतिशत रहेको छ । मृत्यु दर पनि १.५५ प्रतिशतमा झरेको छ । स्वास्थ्य विभागका अनुसार निको हुने र संक्रमित हुनेहरु बीचको अन्तर १५ हजार बराबर रहेको छ ।
यी तथ्यांकहरू सन्तोषजनक छन्, तर यसले हामीलाई सन्तोषजनक बनाउँदैन । वास्तवमा विश्वभर यो देखिएको छ कि जहाँ पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण को गति कम भयो, त्यहाँ एक नयाँ लहर देखा परेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर पहिलेको भन्दा धेरै गम्भीर देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा, संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि हामीले लिइरहेका सावधानीहरू पालना गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । ति प्रावधानहरुलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो सम्भव छ कि हामी कोरोनाको दोस्रो लहर रोक्न सक्षम हुनेछौं ।
हालै फ्रान्समा दोस्रो लहर देखा पर्यो जुन पहिलेको भन्दा धेरै कठोर थियो । त्यसकारण हामी विश्वस्त हुन आवश्यक छैन कि हामीले कोरोनालाई जितेका छौं । यद्यपि यो सत्य हो कि हाम्रो देशको सरकारले राम्रो रणनीतिका साथ कोरोनासँग लड्ने काम गर्यो ।
यही कारण धेरै जनसंख्या भएर पनि अमेरिका, ब्राजिल र फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेनलगायत अन्य युरोपेली देशहरूको तुलनामा धेरै कम मृत्यु दर रहेको छ । कोरोना जबसम्म हामीसँग हुन्छ हामीले तीन चीजहरूलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्छ।
हामीले हाम्रो कपडा जस्तो मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ। घरहरूमा ताजा हावा आउँने जाने व्यवस्थाको साथसाथै शारीरिक दूरी पनि पालन गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार यी तीन चीजहरू यस्ता हुन्, जसको सहयोगमा हामी कोरोना संकटसँग भिड्न सक्दछौं ।
माथि उल्लेख गरिएका यी कार्यमार्फत पनि कोरोना भाइरस रोक्नको लागि ठूलो हदसम्म सफलता मिल्ने गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो कि हाम्रा घरहरुमा हावा आउँनका लागि सहज हुन्छ । त्यसकारण कोठा संक्रमण रोक्नको लागि बढी सहयोगी भइरहेको छ ।
यद्यपि चिन्ताको विषय यो छ कि आउँदो दिनमा नवरात्रि, दशै, तिहारजस्ता चाडहरू आउँदैछन् । यी त्यस्ता चाडहरु हुन जसमा मानिसहरू बढी भेला हुने गर्छन् । अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्तिहरूको ठुलो भिड जम्मा हुने गरेको छ । स्कूल, कलेज र अन्य शैक्षिक संस्था खोल्ने पनि तयारी भइरहेको छ ।
यदि हामी शारीरिक दुरीको पालना कडाईका साथ गरेनौं भने संक्रमण अचानक बढ्न सक्छ । जब मानिसहरूले विश्वस्त हुन्छन् कि हामीले महामारीलाई जितेका छौं, तब यसको दोस्रो लहर अझ गम्भीर रूपमा देखा पर्दछ । यसमा हामीले पहिले गर्दै आएका उपायहरुलाई बिर्सने गर्नाले संक्रमण थप भयावह हुने गरेको खुलासा भएको छ ।
यो पनि पूर्ण निश्चयता साथ भन्न सकिदैन कि संक्रमणको दोस्रो लहर कहिले आउछ ? यो कत्तिको गम्भीर वा सामान्य हुनेछ ? अन्य देशहरू र स्कूल, कलेज, मल्लहरू आदिमा कोरोनाको घटना घट्ने बित्तिकै संक्रमणको दोस्रो लहर पनि आएको देखिएको छ ।
त्यसकारण, हामी विश्वस्त हुनु हुँदैन कि कोरोनाको संक्रमण दर कम भएको छ । हामीले ती सबै सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ जुन हामीले अहिले गरिरहेका छौं । अहिले गरिरहेका सबै कुराहरु नै पछ्याउनु पर्छ । केहि व्यक्तिले न शारीरिक दूरीको ख्याल गरिरहेका छन् न त मास्कहरू पनि ठीक तरीकाले लगाइरहेका छन् ।
त्यस्ता व्यक्तिहरुका कारण महामारी एक ठूलो चुनौती साबित हुन सक्छ, त्यसैले हामी यस्ता मानिसहरूलाई सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्छौ । त्यस्ता मानिसहरुलाई यसको असरका बारेमा सबैले भन्नु पर्छ । विश्वभरका मानिसहरु उत्सुकताका साथ कोरोनारिुद्धको खोप आउँने दिन पर्खिरहेका छन् । खोप निर्माणको लडाँई पनि जारी रहेको छ ।
यो आशा गरिएको छ कि बर्षको अन्त्यसम्म हामी खोप प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछौं । तर सबैले यो खोप चाँडै पाउने सम्भावना धेरै कम देखिएको छ । त्यसैले हामीले मास्कहरू प्रयोग गरिरहनु पर्छ जुन अहिलेको समयमा कुनै खोप भन्दा कम हुँदैन । शाररीक दुरी लगायत माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुमा ध्यान दिने हो भने हामी यस संक्रमणलाई हराउन सफल हुनेछौं ।
प्रस्तुति: रुमा सिन्हा, लखनऊ
लेखक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (सीएसआईआर), नयाँ दिल्ली को महानिर्देशक हुनुहुन्छ ।
भारी वर्षासँगै बाढी पहिरोको खतरा, सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आह्वान
पैसा होइन, सीप देउ : धनीहरुको वृद्धभत्ता रोकौँ, नचाहिने सरकारी संस्था खारेज गरौँ